Umgewu, intsebenziswano, ulwaphulo-mthetho, imbacu kunye nombhali. | Uncwadi lwangoku
Umgewu, intsebenziswano, ulwaphulo-mthetho, imbacu kunye nombhali.
UAlex Martinez | | I-Biography, Ababhali
Ifoto nguJosé Giovanni.
Kuyo yonke imbali sinamatyala apho Ubomi bomnye umbhali buye babugqwesa ngaphezu kwayo nayiphi na intsomi yoncwadi ukuze bona, okanye abanye, babe nokudala. Ubomi bususwe kude kwiprototype yombhali ovalelwe iiyure kunye neeyure kwindawo yakhe yendalo, kude nabo nabuphi na ububi kwaye kugxilwe kuphela kwinkcubeko noncwadi.
Ngokusengqiqweni, nangona zikhona ezi ndidi zezinto eziphilayo phakathi kwababhali abanikwe luluntu, kufuneka ndivume ukuba ayisiyonto iqhelekileyo leyo, ngaphandle kwento yokuba lo mfanekiso unokuba usasazekile phakathi kweengcinga zoluntu lwethu.
Ngapha koko, Ndicinga ukuba bambalwa ababhali ababenobomi kunye nembali yobuqu efana neyaseFrance yemvelaphi yaseCorsican uJosé Giovanni. Ubomi obuchasene ngokupheleleyo noko kunokucingelwa Umbhali owathi, ixesha elininzi lobukho bakhe, wabandakanyeka ekubulaweni kwabantu, kwintsebenziswano, ekuphangweni nasekuphangweni kolwaphulo mthetho kwiYurophu eyayinengxaki ekupheleni kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi.
UJosé Giovani, kuqala kwiinto zonke, Wazalelwa eParis ngoJuni 22, 1923 kwaye abazali bakhe, abasuka kwisiqithi saseCorsica, bambhaptiza ngegama likaJoseph Damiani yayiligama lakhe lokwenyani nefani yakhe.
Xa iFrance yayihluthwe nguRhulumente kaHitler's III, uGiovanni oselula owayebala Kwiminyaka nje eli-17 ubudala, waqala umsebenzi wakhe wolwaphulo-mthetho owaqhubeka ngexesha lokuthinjwa kweJamani nakwiminyaka elandelayo. Wangena ke kwiqela lemigulukudu ethathe indawo yaseParis Pigalle.
Amalungu eli qela anje ngo-Abel Damos ngaxeshanye ayengaphakathi kwezixhobo ze IGestapo IsiJamani kwisebe laso kwilizwe leGallic. Ke, "Indawo yenqwelo moya" yile ndlela IGestapo waxhamla kwiqela lolwaphulo-mthetho awayehlala kulo uGiovanni nabanye, ukwandisa ubukhosi bakhe phakathi kwabantu. Ngenxa yoko, la maqela afumene "patent marque" yokuqhubeka nokungohlwaywa ngokupheleleyo xa besenza izinto ezimbi abazenzileyo.
Onke amalungu, ngale ndlela, abesebenzisana namaJamani kwaye, abaninzi, babephethe intshutshiso ye Abathathi-nxaxheba, AmaYuda okanye abantu abachasene nolawulo. Ngexesha lale minyaka yobunzima kunye nobunzima uGiovanni bathathe inxaxheba kwi-blackmail yazo zonke iintlobo nasekubulaweni komphathi wenkampani Ivenkile ebizwa ngokuba yiHaïm Cohen. Ngapha koko, olona lwaphulo-mthetho ludume ngokuqhatha nokubulala abazalwana bakaJules noRoger Peugeot.
Kule nto yokubulala iphindwe kabini eyenzeka ngo-1945 kwaye ngexesha lophando lwayo ngo-1948, wabanjwa wagwetyelwa ukufa. Ngaphandle kwento yokuba isiphelo sakhe samkhokelela kwityhefu, wakwazi ukubaleka kwintlekele kuba uMongameli Vincent Auriol, ekusebenziseni inqaku le-17 loMgaqo-siseko waseFrance, isigwebo sakhe sokufa satshintshwa saba yiminyaka engamashumi amabini esebenza nzima.
Nangona kunjalo, ophambili wethu, ngexesha lakhe njengebanjwa, Wayeyinxalenye yemizamo yokubaleka ngokumangalisayo kwintolongo yaseLa Santé ngokusebenzisa itonela elalingamvumeli ukuba abaleke entolongweni.. Nje ukuba aphume entolongweni kwaye ngenxa yesigwebo sakhe esiya kusebenza ngokunyanzelwa, wayecoca imigodi eyinxalenye yodonga lukaHitler olubizwa ngokuba yiAtlantic kumanxweme aseNormandy nakwiindawo ezikufutshane nabo.
Kwakungeli xesha emva kokugwetywa kwakhe, eneminyaka engama-33, xa waqala indima yakhe njengombhali ebhala “Le Trou ", inoveli yakhe yokuqala isekwe ngokuchanekileyo ekuzameni kwakhe ukubaleka namanye amabanjwa. Okumangalisayo kukuba, ligqwetha lakhe elathi ekugqibeleni lahlela le ncwadi.
Le ncwadi yokuqala yalandelwa ngu: "Umngcipheko ophezulu", "UUluntu"Kwaye" Le Deuxième Souffle »". Bonke, kunye no "Le Trou", nabo baziswa kwiscreen esikhulu. Ngenxa yoku, yonke into iyathethwa, wayenamanyathelo akhe okuqala njengombhali wesikrini kwihlabathi lobugcisa besixhenxe, ke ngoko waba ngumbhali owenza izinto ezininzi.
Ngexesha lakhe lokugqibela lobomi Wazinikela ekutyeleleni amabanjwa amancinci kwiintolongo zase-France ukuze abaqinisekise kwaye abakhuthaze ekubuyeni kwabo ezibonisa njengomzekelo wokubonisa ukuba ikamva linokwenzeka ngaphandle kolwaphulo-mthetho.
Ngokuqinisekileyo uGiovanni wayelixhoba lexesha lakhe kunye nexesha apho ukungazinzi kwezopolitiko nezentlalo kunye nemfazwe, kwathatha amadoda amaninzi ngendlela engachazekiyo okanye evumelekileyo kwimihla yethu.
Akunakulunga kuthi, ke ngoko, ukuqala ukugweba uGiovanni ngenxa yexesha lakhe elidlulileyo, nangona kunjalo, ngokusengqiqweni, ukuba into awayenzayo yayisoyikeka. Ngokuchasene noko, ndikhetha ukuxabisa ukuba obu bomi bungabekeki bungangunobangela womsebenzi wokubhala ohlonipheke ngokwenene.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Umgewu, intsebenziswano, ulwaphulo-mthetho, imbacu kunye nombhali.
Inqaku elilunge kakhulu. Ndiyifundile iGiovanni kwaye ndiyithandile. Ndihlala nesivakalisi sakho sokugqibela.
Molo Mariola, kulungile, ndiyithandile kakhulu. Inyani yile yokuba ndicinga ukuba sinee-flavour ezifanayo zokubhala lol hug.
Ewe, ziyafana kakhulu, he, he ...
Bekulithuba noko ndifunda nantoni na ngawe. Inqaku elinomdla kakhulu. Bendingazi ngobukho balo mlinganiswa. Ubomi obuvela kwimovie okanye inoveli, buyinyani ngokupheleleyo. Nditsho nokushiya intsimi yoncwadi, kukwakho nabantu abanobomi obuya kufaneleka kwi-cinema kunye nomsebenzi obhaliweyo kwaye akukho mntu okanye phantse akukho mntu owaziyo.
Bendingazi ukuba iGestapo ithathe ithuba lemigulukudu yolwaphulo-mthetho ukulawula ngcono amaFrentshi (kwaye ndiyayithanda iMfazwe yesibini yeHlabathi). Ndiyarhana ukuba bambalwa abantu abaziyo. Eyoyikisayo kwaye ejijekileyo, kodwa iluncedo kakhulu kuwo omabini amaqela. Abantu abazothe.
Ewe kunjalo, ayiqhelekanga into yokuba umntu oneprofayili enjengoJosé Giovanni aphinde azifake (ndicinga njalo). Kwaye okungaqhelekanga kakhulu kukuzinikezela kwakhe ekubhaleni.
Masibone ukuba ndingazibona iimovie ezisekwe kwiincwadi zakhe (ndiyaqikelela ukuba kufanelekile) kwaye ndizifunde ezinye zazo.
Imibuliso evela eOviedo.
Iincwadi zokuzinceda. Ngaba bayanceda ngokwenene okanye ngaba fiasco?
Iincwadi ezintlanu ezilungileyo zabantwana